परियोजना कार्यान्वयन एकाइ चितवनमा धान रोप्ने मेशिनबाट धान रोपिदै।
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ पर्वतमा ड्रम सिडर बाट सिधै विउ रोप्ने प्रविधिको परिक्षण।
सुन्तला ग्रेडिङ्ग मेशीन, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, स्याङ्जा
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ चितवनमा धान रोप्ने मेशिनको परिक्षण गर्दै।
रष्टिक स्टोर, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, बझाङ्ग
दरखास्त फारम र प्रवेश पत्र 2077-11-03 Closed !!!
सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2077-11-03 Closed !!!
सेवा करारमा कृषि/पशु सेवा प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यबिधि